Al-shabaab oo soo bandhigtay Ajaanib
3 Apr 3, 2009 - 2:27:47 AM
Ururka Al-shabaab ayaa soo bandhigay cajalad Video ah oo muujinaysa shisheeye ka barbar dagaalama, iyadoo dagaalyahanadii kasoo muuqday cajaladan ay ku baaqeen dagaalo cusub [Jihaad].
Kooxdan oo uu Mareykanku ku daray liiska ururada argagaxisada ah ee dunida ayaa cajalada ay soo bandhigeen waxaa kasoo muuqday dagaalyahan Mareykankan ah oo lagu magacaabo Abu-Mansor Al-Amriki, taasoo soconaysay 31-daqiiqo.
"Hadii aad awoodaan inaad ku dhiirigelisaan caruurtiina, qof aad daris tihiin iyo qof aad taqaanaan u soo dira jihaadka, u soo diro halkaan si ay ula dagalaamaan reer galbeedka" ayuu Abu-Mansor Al-Amriki ku yiri cajalada.
Al-Amriki ayay sirdoonka Mareykanka ku qiyaaseen da'diisa 20 - 30-sano, waxaana ay sheegeen in erayada Ingiriiska ah ee uu ku hadlayo ay yihiin kuwa looga hadlo galbeedka Mareykanka.
Dagaalyahan kale oo reer galbeed ah ayaa kasoo muuqday cajalada, kaasoo wajiga xirtay, wuxuuna ku hadlayay afka Ingiriiska, isagoo ugu baaqay dhamaan Jihaadiyiinta calaamka inay ka qaybgalaan dagaalada Somalia.
Filimkan ayaa lagu soo beegay xili FBI-da Mareykanka shaaciyeen in 12-dhalinyaro Somali ah oo ku noolaa Mareykanka ay aadeen Somalia, kuwaasoo ku biiray kooxda mayalka adag ee Al-shabaab.
"Cajaladan muhim ayay noo tahay" ayuu yiri Philip Mudd oo ka tirsan saraakiisha sarsare ee FBI-da, isagoo intaas ku daray: "Waxaa jira shaqsiyaad badan oo qorsheynaya inay maraan wadadaas qaldan".
Philip Mudd wuxuu sheegay inay xaqiijiyeen in kooxda Al-shabaab ay gacan ka hesho shabakada Al-Qaacida ee uu hogaamiyo Osama Bin Laden, ayna xoojinayaan awoodooda Somalia, isagoo xusay inay jiraan dadaalo ay ka wadaan caalamka.
Erayada lagu caynayay Bush ayaa waxaa ka mid ahaa: "Riyadii Mareykanku way guuldareysatay... Bush wuxuu u dhacay sidii Stalin... Dhaqaaluhu wuu burburay... doobku wuu ooyayaa... waxaad dhimanaysaa adigoo ooyaya... Inagana waxaa na xafidaya Alle".
Cajaladan ayaa noqonaya tii ugu horeysay oo ay Al-shabaab soo bandhigaan taasoo muujinaysa inay jiraan kooxo cadaan ah oo ka barbar dagaalama kooxdan oo kasoo horay uga go'day Midowgii Maxkamadaha.
Radio Garowe + Wakaaladaha
Doorashada Jubaland oo lagu taageeray kulan Bossaso